[WASPADA] Berhati-Hati Ketika Membeli-Belah, Beg Tangan Ditoreh!
The Art of War in the East
သေပြီးတဲ့လူတွေကိုတောင် စော်ကားနိုင်တဲ့ အောက်တန်းစားလူမျိုးတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံ
A Most Unusual 'Hate' Letter
မင်းတုန်းမင်း မိဘုရားများရဲ့ “မောင်းမ လက်သုံးပုံ” ကျမ်းပုရပိုဒ်
Isu Kafir Harbi - Membongkar Kejahilan Pihak Yang Tuduh DAP Kafir Harbi
GAMBAR BERBICARA: Inkuiri Suhakam - Penggunaan Gas Pemedih Mata Secara Membabi Buta
[BERGAMBAR] Di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Bersama Ustaz Azhar Idrus Malam Tadi
Posted: 12 Aug 2012 11:00 AM PDT
Dalam keghairahan orang ramai terutama kaum wanita membeli-belah di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman (TAR) dan Jalan Masjid India di sini, mereka diingatkan supaya tidak leka dengan perbuatan jenayah seperti menyeluk saku dan ragut.
"Kita tangkap beberapa warga asing yang menoreh beg tangan pengunjung dengan menggunakan pisau kecil dan mencuri barangan berharga seperti telefon bimbit dan beg duit.
"Saya anggarkan antara 30,000 hingga 40,000 pengunjung datang membeli-belah di Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Jalan Masjid India bagi membuat persiapan Hari Raya dan mereka datang seawal jam 8 pagi," katanya kepada Bernama.
Abdul Rahman berkata, anggota persatuannya bergilir-gilir bertugas di kedua-dua kawasan terbabit bagi memastikan keselamatan pengunjung.
Persatuan itu yang ditubuhkan sejak 2007 sentiasa berkerjasama dengan Rela, Jabatan Pertahanan Awam, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur serta Polis Diraja Malaysia bagi menjaga keselamatan di kawasan terbabit.
Seorang pengunjung Nur Baiti Bukhari, 29, dari Damansara Damai berkata, beliau mengambil kesempatan untuk mengunjungi bazar itu sempena cuti hujung minggu. –BERNAMA
Posted: 12 Aug 2012 07:41 AM PDT
Sun Tzu is famous for his strategic philosophy whereby he advocates attacking the opposing side's weaknesses.
"Now an army may be likened to water, for just as flowing water avoid the heights and hastens to the lowlands, so an army avoids strength and strikes weakness."
In times of competition, key players may appear to be invincible and their enemies may even fail to discern inherent weaknesses. To counter such scenarios, one must discover ways whereby those strengths can be turned into weaknesses.
And that is exactly what we see in Sabah.
Foralong time, Sabah had been consideredafixed deposit for the status quo to deliver the seats for it to form the ruling coaition. As such, decades of governance over this state gave them seemingly unassailable invincibility. Hence, Anwar had to find an approach that would work. The Pakatanization of West Malaysia had borne some success but the real battle is in the East.
Fully aware of the discontent of Sabahans, Anwar went on his 'campaign to offer Pakatan as the escape hatch for the grouses and concerns of Sabahans.
So now, Anwar is on the silent assault to win Sabahans to be on the road to Putrajaya. Whether he will reach his destination remains to be seen.
1. To that end, he has to politically socialize Sabahans and wrest support from them without destroying the delicate social fabric of the state.
Sun Tzu calls this the need to "win-all-without-fighting". To survive and prosper, PR has to capture the heart and spirit of Sabahans - to offer them the alternative or the escape hatch from all that they have been suffering.
Looking at the development of events, it is clear that Anwar has learnt from his Sept 16th debacle. Rather than makingablanket overconfident statement, he is now usingasubtle, indirect, and low-key approach that appears harmless so as not to trigger BN into an onslaught. So we do not hear or see an en bloc exodus but one that comes little by little. The question at the tip of our tongues is - who is next?
2) Clearly, Anwar is avoiding the strength of BN (election machinery, resources etc) and capitalizing on their weaknesses instead.
"An army may be likened to water, for just as flowing water avoids the heights and hastens to the lowlands, so an army avoids strength and strikes weakness."
Older, wiser and maybe more tired, we do not see Anwar or Pakatan leaders launching head-on, direct attacks against their nemesis like in the past. But they are capitalising on the thorn in the side of Sabahans which is their opponents' weaknesses. In this way, it is likely PR can maximize their gains with little use of resources. Whether or not this can pay dividends remains to be seen. Hence, I believe no one must take things for granted or foolishly assume that things are turning for the better for PR.
3) The time has come for PR to talk less, think more and skilfully maximise their intelligence to achieve their agenda.
"Know the enemy and know yourself; inahundred battles you will never be in peril"
Realistically, for any major battle/competition, one needs to discover the weaknesses of the enemy and evenadeep understanding of their strategy, capabilities, thoughts and desires. At the same time, PR needsatime of consolidation to reassess and know their own strengths and weaknesses. Witharealistic assessment of the battle "terrain", PR can prevent the enemy from working against them. Unfortunately, history shows that PR leaders talkalot, tell all they want to do - thereby giving their enemy time and ground to plan and strategize against them. Hence, asapreventive measure, it is critical for PR to SHUT UP, hide their plans and keep them secret.
4) Seize the day speedily and be prepared
In any battle situation, it is essential that one must exploit foresight and even deception that we can act with blinding speed. That is not to say that things are done hastily. Rather, ensure preparation and cut down on processes eg in decision making or even public relations exercise. The ultimate goal is to win the support of the Sabahans. For that, they need to empathise and to deal with skeletons in the closet.
5) With unity, comes power.
Instead of being the underdogs, it is time PR changes or redefines the rules of contest that these can be in line with their agenda and this can be achieved via alliances so as to be able to call the shots in the game.
6) Effective leadership is vital!
In "The Art of War", Sun Tzu argues that onlyaspecial kind of leader can implement these strategic concepts to bring out the best in people. Leadership qualities needed are wisdom, sincerity, courageousness, strictness and the ability to be human. Selflessness in putting the needs of others behind those of the majority will elicit the best results.
Before PR supporters go onavictory dance even before the battle has begun, we have to ask ourselves - can PR leaders do that? To put the needs of Sabahans FIRST before their need for dominance and power? If they can, that will pave the way to Putrajaya. If not, we can start buying boxes of tissues, be in mourning and after which we have to start planning for GE 14.
This evening, The Malaysian Insider reported HERE that Datuk Seri Anwar Ibrahim suggested today that the government had deliberately refused to have the Sabah Royal Commission of Inquiry (RCI) probe those responsible for the alleged "citzenships-for-votes" deal with foreigners in order to protect certain personalities. He went on to say that "the entire RCI was flawed as its terms were lacking details and do not include identifying those responsible or recommending punishment on them."
Well, it is up to Anwar and Pakatan to tell Sabahans their blue print of action as creatively and as convincingly. If they can leverage on all the weaknesses of the other side as spelled out in THIS ARTICLE, I believeabetter Malaysia awaits all Malaysians. Creative strategies when used correctly are the keys to lasting success. So, it is really up to PR to play the game correctly. If not, their dreams will go up in smoke and BN will be in power again.
*It has been more than halfayear since I wrote on political issues. This post isaspontaneous response to the Malaysian Insider report because I was thinking of 'The Art of War' and how PR needs to use it in their strategies.
(တောင်ကုတ်မှာ အပြစ်မဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဆယ်ဦးကို ရာနဲ့ချီတဲ့ လူတွေက ၀ိုင်းပြီး ရိုက်သတ်ကြတယ်။ သေတဲ့အလောင်းတွေကို အလယ်မှာချပြီး မိန်းမယောက်ျားတွေ ကခုန်ပြီး အောင်ပွဲခံတယ်။ အရက်ပုလင်းခွံတွေကို အလောင်းတွေပေါ် ပစ်ချတယ်။အလောင်းတွေကို သေးနဲ့ပန်းတယ်။ အလောင်းတွေပေါ် အန်ချတယ်။ မိန်းမတွေ အရှက်မဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ အလောင်းတွေပေါ် တက်နင်းပြီး ကပြအောင်ပွဲခံတယ်။ နောက်ဆုံး အလောင်းတွေကို သံတွဲကိုသယ်သွားတော့ ကားပေါ်ကို တိရစ္ဆာန်တွေလို ရက်ရက်စက်စက် ပစ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်ပြောခဲ့သလိုတွေ သူတို့ လုပ်ခဲ့လား၊ မလုပ်ခဲ့လားဆိုတာကိုတော့ ဒီပုံကိုသာ ကြည့်လိုက်ကြပါ။ ဒါ သံတွဲမြို့ကို အလောင်းတွေ ပြန်ယူလာတော့ ကားပေါ်မှာ အလောင်းတွေနဲ့ ကပ်ပါလာတဲ့ သူတို့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ သက်သေတွေပေါ့။ အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဗွီဒီယိုတွေကို ရယူဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။)
♦ ‎"သေပြီးတဲ့လူတွေကိုတောင် စော်ကားနိုင်တဲ့ အောက်တန်းစားလူမျိုးတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ရတာ ရှက်တယ်" ဆိုတဲ့ စကားတော့ ပြင်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။ ရိုးရိုးသားသား သတိပေးတာပါ၊
♦ အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေအပေါ်မှာ ဘာမှ မပြောလိုပါ၊ အောက်တန်းစားလူမျိုးတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံလို့ပြောတာတော့တော်တော်လေး လွန်နေပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းကလဲ မြန်မာလိုပဲ ရေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားပဲ မဟုတ်လား။
♦ သိတ်ရှက်နေရင်တော့ တခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကိုသွားပြီး နိုင်ငံသား ခံယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ ခဝါချပစ်လိုက်ပါ။
♦ ကို Win Naing ရေ မိတ်ဆွေပြောသလိုသာ လုပ်လို့ရရင်လေ လုပ်ခဲ့ပြီးတာကြာပေါ့ဗျာ။ တစိတ်လောက် မိတ်ဆွေ ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ကူညီလိုက်လေ။ ကြိုဆိုပါတယ်။
♦ ကျနော် ဆိုလိုနေတာ အစွန်းရောက်သူတစ်စုကိုပါ။ ကျနော်လဲ ဒီနိုင်ငံသားပဲ။ ဒီနိုင်ငံသားကလွဲပြီး ဘယ်နိုင်ငံသားမှ ဖြစ်လို့မရပါ။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကို မှေးမှိန်အောင်လုပ်တဲ့ လူတစ်စုကို ကန့်ကွက်ရမဲ့အစား မိတ်ဆွေတို့က ကာကွယ်ပေးနေတယ်။ တစ်သက်လုံး ပုံရိပ်မကောင်းခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေကို ရှေ့တန်းထုတ် ပွဲတင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ပြောတဲ့ လူအုပ်စုထဲ မိတ်ဆွေတို့ပါ ပါသွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူမပြု မိမိမှုဆိုတဲ့စကားအတိုင်း မိတ်ဆွေတို့ လူသားဆိုရင် လူသားဆန်ဆန်ပဲ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ အမှန်တရားကို လက်ခံတတ်အောင် ကြိုးစားပါ။
♦ Kay Te Zat O ကျနော်တို့ ဒီနေရာမှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆွေးနွေကြတာပေါ့ဗျာ၊ ဒီစကားကို အရင်ဆုံး ကျနော်ပြောထားပါတယ်နော။
♦ စပြီး ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ကတည်းက ကျနော် အဲဒီပြည်နယ်ဘက်ကို တစ်ခေါက်မှ မရောက်သလို သွားဖို့လဲ အချိန်မရှိပါဘူး၊ ကိုKay Te Zat O ရော ရောက်ဖြစ်ပါသလား၊ အခု လူကြီးတွေ သွားကြတော့ တရားဝင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ ထုတ်ပြန်ကြတာတွေနဲ့၊ သတင်းဗွီဒီယိုတွေပဲ ကြည့်ရတာပါ၊
♦ ဘယ်ဟာက အမှန်တရားလဲဆိုတာ ဖြေရှင်းဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းနေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံက လူကြီးတွေရော ၊ ပြည်ပနိုင်ငံတွေက လူကြီးတွေပါ ဝိုင်းပြီး အဖြေရှာနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာအောင် ဦးတည်လှုံ့ဆော်နေတာမျိုးကိုတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့ ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေက လူထုအများစုက လက်မခံကြပါဘူး။
♦ နောက်တစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံဟာ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်တဲ့အတွက် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက ဒီအတိုင်း ကြည့်မနေပါဘူး၊ ဘယ်ဘာသာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်းမဲ့အပြုအမူမျိုး လုပ်လာရင် လိုအပ်သလို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့တာ တွေ့ဖူးသိဖူးပြီး ဖြစ်မှာပါ။
♦ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးပြဿနာကို ဘာသာရေးပြဿနာတစ်ခုဆီ ဆွဲတင်မသွားမိအောင် ဘယ်ဘာသာဝင်တွေဘက်ကဖြစ်ဖြစ် သတိနဲ့တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်မှ အဲဒီ ဒေသမှာရှိတဲ့ ဘယ်လူမျိုးမဆို အေးအေးချမ်းချမ်းနေရတဲ့ဘဝတွေကို ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ အဓိက concept ပျောက်မသွားအောင် မြန်မာနိုင်ငံသားခံယူထားသူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။
♦ ဘယ်ဘာသာရဲ့ အရှင်သခင်တွေကိုမှ နာမည်တွေတပ်ပြီးပြောမနေကြပါနဲ့၊ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ မဟုတ်ရင် အဲဒီဘာသာကို စော်ကားရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ကျနော် အားလုံးအတွက် အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်စေမဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှု ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
-‎[Kay Te Zat O ကျနော်တို့ ဒီနေရာမှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆွေးနွေကြတာပေါ့ဗျာ၊ ဒီစကားကို အရင်ဆုံး ကျနော်ပြောထားပါတယ်နော။]
♦ ကျနော့်ဘက်ကလဲ ဒါကို ပြောထားချင်ပါတယ်။
[စပြီး ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ကတည်းက ကျနော် အဲဒီပြည်နယ်ဘက်ကို တစ်ခေါက်မှ မရောက်သလို သွားဖို့လဲ အချိန်မရှိပါဘူး၊ ကိုKay Te Zat O ရော ရောက်ဖြစ်ပါသလား၊ အခု လူကြီးတွေ သွားကြတော့ တရားဝင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ ထုတ်ပြန်ကြတာတွေနဲ့၊ သတင်းဗွီဒီယိုတွေပဲ ကြည့်ရတာပါ၊]
♦ တရားဝင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေက ဘယ်အတိုင်းအတာထိ မှန်ကန်တယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါသလဲ။
♦ ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကို ဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်လာကတည်းက အချိန်နဲ့တပြေးညီ တိုက်ရိုက်နီးနီး တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေ ရှိပြီးသားပါ။ ကျနော့် tl မှာရော၊ notes တွေမှာရော တင်ထားပါတယ်။ သေချာ ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျနော် ဖြစ်တဲ့နေရာတွေက ကာယကံရှင်တွေဆီကို (ဖုန်း၊ အီးမေလ်၊ အင်တာနက်၊ စာ၊ လူကိုယ်တိုင်) နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သတင်းတွေကို ရသမျှ ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။
[ဘယ်ဟာက အမှန်တရားလဲဆိုတာ ဖြေရှင်းဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းနေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံက လူကြီးတွေရော ၊ ပြည်ပနိုင်ငံတွေက လူကြီးတွေပါ ဝိုင်းပြီး အဖြေရှာနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာအောင် ဦးတည်လှုံ့ဆော်နေတာမျိုးကိုတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့ ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေက လူထုအများစုက လက်မခံကြပါဘူး။]
♦ ဒါဟာ သေချာပေါက် ဘာသာရေးကို အခြေခံတယ်လို့ ကျနော့်ဘက်က ပြောလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့…
ဒီကိစ္စတွေ ဖြစ်မလာခင်ကတည်းက ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ကံမ္မ၊ ဆိုင်းတောင်နေရာတွေက ဗလီတွေကို ဖျက်ဆီးလာခဲ့တယ်။
ဖြစ်ပြီးတော့လဲ ပျော်ဘွယ်လိုနေရာမှာ ထပ်ဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်တယ်။
အဲ့ဒီအရင်ကတည်းကလည်း မြန်မာပြည်မှာ ဗလီတွေကို ဘုန်းကြီးတွေက ဦးဆောင်တဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်းကတစ်မျိုး၊ စစ်တပ်က ဖျက်ဆီးခြင်းတစ်ဖုံ၊ လူထုက ၀ိုင်းဝန်းဖျက်ဆီးခြင်းတစ်နည်းနဲ့ နှစ်စဉ်မပြတ် ဖြစ်နေရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
အွန်လိုင်းမှာ ဘာသာရေးမုန်းတီးမှု လှုံ့ဆော်တာတွေက ဘယ်အချိန်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပါသလဲ?
လက်ရှိအချိန်ထိ တောင်ငူမြို့မှာ ဘာကြောင့် ဗလီတွေ ပိတ်ထားပါသလဲ?
တောင်ငူမှာ ဖြစ်တုန်းက ဗလီတွေအားလုံး အပိတ်ခံရပေမဲ့ ဘုရားတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို ဘာလို့ တစ်ခုမှ မပိတ်ခဲ့ရပါသလဲ?
တောင်ငူမြို့အ၀င်မှာ ရှေးဟောင်းမွတ်စလင်မ်သင်္ချိုင်းနဲ့ သမိုင်းဝင်ဗလီတွေကိုဖျက်ဆီးပြီး ဘာလို့ "ပေါ်တော်မူ"ဘုရားဆိုပြီး တည်ဆောက်ထားပါသလဲ?
တောင်ငူမြို့နဲ့အနီးတ၀ိုက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တုန်းက မွတ်စလင်မ်တွေ 98% ပြန်တောင် မခုခံခဲ့ကြပါဘူး။ အိမ်ပေါင်း ရာနဲ့ချီအောင် ပျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေ အိုးပစ် အိမ်ပစ်ဘ၀နဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာ နေရပ်မပြန်နိုင်ခဲ့ကြတာကို ဘယ်သူများ ဒုက္ခသည်စခန်း ဖွင့် ကူညီခဲ့ပါသလဲ?
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တာနဲ့ ဘာကြောင့် ကုလားလို့ ချိုးနှိမ်စော်ကားနေရတာလဲ?
အစ္စလာမ်ဘာသာကိုယ်းကွယ်သူဆိုရင် ဘာကြောင့် မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စုဇယား ထုတ်ပေးဖို့ ညစ်နေရတာလဲ?
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လို့ "ပသီ-ပါတီ"ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့် မပေးတာလား?
အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘူးသီးတောင် မောင်တောမှာဆိုရင် မွတ်စလင်လူဦးရေများပေမဲ့ အရင်ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ခဲ့တာရယ်၊ အခုမှ မွတ်စလင်မ်တွေက အကြမ်းဖက်သယောင် ပုံဖော်ပြတာတွေဟာ တမင်ဖန်တီးတာ မဟုတ်ဘူးလား?
ဒီ့ထက်မကတဲ့ သမိုင်းရာဇ၀င်တွေ ညစ်ထေးစွာ ရှိခဲ့လို့ အခုကိစ္စကိုလဲ တပ်အပ် ဘာသာရေးကို အခြေခံတဲ့ ပြဿနာလို့ စွတ်စွဲပြောဆိုခြင်းပါ။
-‎[နောက်တစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံဟာ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်တဲ့အတွက် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက ဒီအတိုင်း ကြည့်မနေပါဘူး၊ ဘယ်ဘာသာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်းမဲ့အပြုအမူမျိုး လုပ်လာရင် လိုအပ်သလို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့တာ တွေ့ဖူးသိဖူးပြီး ဖြစ်မှာပါ။]
♦ မင်းမဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေပေမဲ့ ဖြစ်လာသမျှပြဿနာရပ်တိုင်းမှာ လူနည်းစုဘက်ကိုပဲ တာဝန်ရှိသူတွေက ဘက်လိုက်ဖြေရှင်းခဲ့တာ အစဉ်အလာလို ဖြစ်နေပါပြီ။
♦ အခုလဲ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်အရေးအသားတွေကို အင်တာနက်ပေါ်မှာတင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်က ရေးသားသုံးစွဲနေတာ တွေ့ရသလို၊ အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေမှာပါ ရေးသားဖော်ပြနေတာ လူကြီးမင်းလဲ မြင်မယ်ထင်ပါတယ်။
♦ ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့ ပြောပြပါအုံးမယ်။ ကျောက်ဆည်မှာ အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ ပါဝင်တဲ့ မိသားစု ၁၁ယောက်ကို အိမ်ထဲမှာ မီးရှို့သတ်တုံးက ဖြစ်ပျက်မှုပြီးသွားတဲ့အခါ အဲ့ဒီမိသားစုထဲက ဖြစ်ပွားစဉ်မှာ မရှိလို့ အသက်ဘေးက လွတ်ခဲ့ရသူ မိသားစုဝင်တချို့ကိုတောင် မဆီမဆိုင် ဖမ်းဆီးထောင်ချ အရေးယူခဲ့တာတွေ၊
♦ တောင်ငူက ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဟံသာဗလီအရှေ့ဘက်က "တားမြစ်နယ်မြေ"လို့ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်သိမ်းယူထားတဲ့ ဗလီပိုင်တိုင်ခန်းတွေနေရာမှာ နှစ်ပတ်လည် ဆွမ်းလောင်းအသင်းဖွဲ့ပြီး ဆွမ်းချက်ခြင်း၊ ဆန်အိတ်များထားခြင်းတွေအပြင်
♦ တောင်ငူ၊ ကန်တော်လမ်း၊ မန်းရပ်မှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ့်အိမ်တွေကို "တားမြစ်နယ်မြေ"သတ်မှတ်ပြီးသိမ်းဆည်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းထားတဲ့နေရာတွေမှာ အခွန်လွတ်ဈေးဆောက်လုပ်ပစ်ခြင်း၊ မရမ်းကျောင်းရဲ့ တောင်ဘက်မုဒ်ဦးအဖြစ် သိမ်းပိုက် အသုံးချလိုက်ခြင်းတွေဟာ မင်းမဲ့စရိုက်တွေ မဟုတ်ပါလား?
♦ ဒါတွေဟာ လိုအပ်သလို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုလို့ရပါသလား?
-‎[နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးပြဿနာကို ဘာသာရေးပြဿနာတစ်ခုဆီ ဆွဲတင်မသွားမိအောင် ဘယ်ဘာသာဝင်တွေဘက်ကဖြစ်ဖြစ် သတိနဲ့တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်မှ အဲဒီ ဒေသမှာရှိတဲ့ ဘယ်လူမျိုးမဆို အေးအေးချမ်းချမ်းနေရတဲ့ဘဝတွေကို ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ အဓိက concept ပျောက်မသွားအောင် မြန်မာနိုင်ငံသားခံယူထားသူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။]
နှစ်ပေါင်းများစွာ နှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့ လူနည်းစုဘာသာဝင်များ (အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ) အပေါ် အခုလို ပွင့်လင်းတဲ့ခေတ်မှာ ကမ္ဘာသိအောင် နိုးကြားစွာနဲ့ လုပ်နေကြတဲ့အပေါ် အမြင်ကြည်လင်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီအစိုးရ သက်ဆိုးမရှည်နိုင်ပါဘူးဆိုတာ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ အဓိက concept က အရောင်ပြောင်း စစ်အစိုးရရဲ့ လှည့်ကွက်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး သတိထား နားလည်ကြဖို့ အထူး လိုအပ်ပါတယ်။
[ဘယ်ဘာသာရဲ့ အရှင်သခင်တွေကိုမှ နာမည်တွေတပ်ပြီးပြောမနေကြပါနဲ့၊ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ မဟုတ်ရင် အဲဒီဘာသာကို စော်ကားရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ကျနော် အားလုံးအတွက် အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်စေမဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှု ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။]
အခုလို ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ဆွေးနွေးလာတဲ့ မိတ်ဆွေအတွက် အထူး ဂုဏ်ယူ လေးစားမိပါတယ်။
သေပြီးတဲ့လူတွေကိုတောင် စော်ကားနိုင်တဲ့ အောက်တန်းစားလူမျိုးတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ရတာ ရှက်တယ်။ (တောင်ကုတ်မှာ အပြစ်မဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဆယ်ဦးကို ရာနဲ့ချီတဲ့ လူတွေက ၀ိုင်းပြီး ရိုက်သတ်ကြတယ်။ သေတဲ့အလောင်းတွေကို အလယ်မှာချပြီး မိန်းမယောက်ျားတွေ ကခုန်ပြီး အောင်ပွဲခံတယ်။ အရက်ပုလင်းခွံတွေကို အလောင်းတွေပေါ် ပစ်ချတယ်။အလောင်းတွေကို သေးနဲ့ပန်းတယ်။ အလောင်းတွေပေါ် အန်ချတယ်။ မိန်းမတွေ အရှက်မဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ အလောင်းတွေပေါ် တက်နင်းပြီး ကပြအောင်ပွဲခံတယ်။ နောက်ဆုံး အလောင်းတွေကို သံတွဲကိုသယ်သွားတော့ ကားပေါ်ကို တိရစ္ဆာန်တွေလို ရက်ရက်စက်စက် ပစ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်ပြောခဲ့သလိုတွေ သူတို့ လုပ်ခဲ့လား၊ မလုပ်ခဲ့လားဆိုတာကိုတော့ ဒီပုံကိုသာ ကြည့်လိုက်ကြပါ။ ဒါ သံတွဲမြို့ကို အလောင်းတွေ ပြန်ယူလာတော့ ကားပေါ်မှာ အလောင်းတွေတင်လာတဲ့ ပုံပါ။ သူတို့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ သက်သေတွေပေါ့။ အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဗွီဒီယိုတွေကို ရယူဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။)
ကောင်းပါပြီ၊ ဒီလောက်အထိ ကျနော်တို့ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ပြီး ဆွေးနွေးပြီးပြီဆိုတော့ အစိုးရက ဖြစ်စေ ၊ သက်ဆိုင်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဖြစ်စေ သူတို့ ဒီနေရာကိုရောက်လာကြလို့ ဖတ်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင် သူတို့ အလုပ်ကို သူတို့ လုပ်ကြမှာပါ။ အခုချိန်အထိ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြန်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရကလဲ အခု သူ့လက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုင်တွယ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်၊ အရင် တောင်ငူမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ ကျနော် မသိခဲ့တဲ့အတွက် သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တကယ်ခံစားကြရသူတွေအတွက်လဲ စာနာမိပါတယ်။ လက်ဖဝါးတစ်ဘက်တည်းက မကြည့်ပဲ လက်ဖမိုးဘက်ကလဲ ကြည့်ပေး မြင်ပေးဖို့ လိုမယ်ဆိုတာ ကျနော် သဘောပေါက်ပါတယ်။
ကာလရှည်အမ်ြတွယ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြဿနာကို ဒီနိုင်ငံ အစိုးရ က ရော၊ နိုင်ငံတကာကပါ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းကြတဲ့နေရာမှာ ပြဿနာကို ဒီထက် ပိုပြီး ကြီးမလာစေချင်ပါဘူး၊ လူ့အသက်တွေ ထပ်ပြီး စတေးကြရတာမျိုးလဲ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ် ကလေးသူငယ်တွေဟာ အလွန် သနားစရာကောင်းပါတယ်၊ သူတို့ ဘာမှ မသိတဲ့ ပြဿနာကြီးက သူတို့ရဲ့ ဘဝ ရှေ့ရေးဘာမှန်းမသိနိုင်တော့အောင် ဖြစ်သွားရတာမျိုးပါ။ မြေစာပင်ဘဝ တကယ်ခံစားရတာက ကလေးတွေပါ။
လူကြီးတွေက အရင့်အရင် ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့၊ သိထားတာတွေနဲ့ သူမှန်တယ် ငါမှားတယ် ထပ်ခါတလဲလဲ ငြင်းခုံနေကြရင် Solution တစ်ခု ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော်တို့ လူကြီးတွေက နောက် ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ရှိကြတော့မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ပြဿနာ ပိုဆိုးလာရင် မသိနိုင်တော့ပါဘူး၊ ကလေးသူငယ်တွေကတော့ မဆုံနိုင်တဲ့ လူမျိုးရေး/ဘာသာရေး/နိုင်ငံရေး စတဲ့ ပြဿနာအကျိုးဆက်တွေကို ဆက်ပြီး ခံစားကြရဦးမှာပါ။ ပြဿနာက ဆက် အဓွန့်ရှည်နေဦးမယ်ဆိုရင် နောင်လာမဲ့ မျိုးဆက် ၃ – ၄ ဆက်လဲ ဒီဘဝတွေက လွတ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ငြိမ်းချမ်ွးာ အဖြေရှာကြပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
http://www.facebook.com/uwinnaing နှင့် http://www.facebook.com/kaytezato တို့ (၁၂-၈-၂၀၁၂)ရက်နေ့က အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted: 12 Aug 2012 08:18 AM PDT
"Saya berpuashati dengan usaha semua pihak terutamanya Penggerak Belia Tempatan (BT) di seluruh Selangor bagi menjayakan program ini. Program memasak bubur lambuk juga berjaya dengan lebih daripada sasaran yang kita tetapkan iaitu dari 100 meningkat kepada 121 penyertaan.
"Kehadiran malam ini (Program sesi soal jawab bersama Ustaz Azhar Idrus) cukup baik dengan kemunculan beberapa artis yang tampil berubah dan ini memberi kekuatan kepada golongan belia bagi mencontohinya," katanya kepada media selepas program tersebut berakhir semalam.
"Contohnya apa yang dibuat Kerajaan Negeri ini ada solat terawih, ada masak bubur lambuk dan yang lain, anak muda yang datang. Kalau program begini dibuat di kampung-kampung, orang tua saja yang datang. Kita boleh tengok sambutannya macam mana dengan berpuluh ribu yang hadir. Sewajarnya program ini kita teruskan. Kerajaan patut memberi keutamaan dan rakyat pula sokong," katanya. -selangorku
Posted: 12 Aug 2012 06:11 AM PDT
"Kami menyedari terdapat beberapa elemen yang tidak mempunyai fakta-fakta tepat terhadap Ladang Rakyat dalam buku tersebut. Dan segala kehakiman di dalam buku tersebut amatlah dikesali.
"Dengan ini kami bersetuju menghentikan pengedaran buku berkenaan dan sesungguhnya menyatakan maaf di atas fakta-fakta yang silap dalam buku tersebut yang telah menjatuhkan reputasi plaintif sebagai sebuah perbadanan milik kerajaan negeri," katanya.
Posted: 12 Aug 2012 04:27 AM PDT
Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah being received by Crown Prince Salman upon his arrival in Makkah. (SPA)
DAMMAM: SIRAJ WAHAB Sunday 12 August 2012
With just two days to go for the conclave of the world's most important Muslim leaders in the most holy city, pressure is mounting on Myanmar's military junta to allow international and Islamic relief agencies access to the besieged Muslim population of the Arakan province.
Two important delegations to Myanmar — one led by Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu and the other by the Organization of Islamic Cooperation — this week have revealed signs of panic and desperation among the junta's top leadership.
"They have been caught out and have now realized that what they have done to Rohingya Muslims constitutesawar crime," one of the diplomats at the Jeddah-based OIC told Arab News.
"There is no doubt that the state was and possibly still is involved in the planned pogrom of Arakan Muslims, and they are now trying to reach out to the Muslim world to lessen the impact of the expected robust and unified Muslim response at the Makkah summit," he said.
Besides Davutoglu, the Turkish delegation included Prime Minister Recep Tayyip Erdogan's wife Emine and daughter Sumeyye. The delegation called on Myanmar President U Thein Sein and Foreign Minister Wunna Maung Lwin and visited Rohingya Muslims staying in the Banduba refugee camp where more than 8,500 Rohingya Muslims have taken shelter.
The delegates receivedafirst-hand account of what exactly happened to the Rohingya Muslims. They talked toanumber of victims, and at one point, according to reports in the Turkish media, the prime minister's wife was reduced to tears while listening an account being recounted by an affected Rohingya Muslim woman.
"We can haul the country's top military leadership, including President Thein Sein and the Arakan provincial head, to the International Court of Justice in The Hague and try them like Solobodan Milosevic and other Serbian leadership," he said. "Among the other viable options are that of approaching the UN Security Council and UN Human Rights Council."
The diplomat also hinted at pressurizing and persuading the world's leading powers to constitute an international peace-keeping force to save the Rohingya Muslims from being obliterated and uprooted from their historic homeland.
The OIC delegates conveyed to President Thein Sein of the outrage in the Muslim world at the deplorable humanitarian conditions in the Arakan province of Myanmar.
The delegation asked for access to Muslim humanitarian organizations to provide emergency aid to inhabitants of the worst-hit Arakan province "without any religious discrimination."
According toapress note issued by the OIC yesterday, Myanmar president welcomed the OIC delegation and stated that that what had happened was notadirect result of religious differences. Instead, he blamed the massacre on what he called as "social problems between various ethnicities in the province."
"President Thein Sein stressed his eagerness for the Muslim world in particular to know the truth about what occurred in Arakan, and he mentioned that he had sent an invitation to OIC Secretary-General Ekmeleddin Ihsanoglu recently to visit Myanmar to observe the real situation in the affected province," said the OIC press note.
The president welcomed the OIC humanitarian delegation to Arakan and agreed to allow the OIC and its partner organizations to provide humanitarian aid to the province in an urgent manner and to open an office in the region in coordination with the central government in Yangon and the local authorities in the province.
He instructed the relevant ministries to sign an agreement with the OIC to complete the arrangements.
Posted: 12 Aug 2012 04:04 AM PDT
Public outrage as national bowler escapes jail for sex with minor
KUALA LUMPUR, Aug 12 — A 21-year-old national bowler who was let off withaRM25,000 bond instead of being jailed after he pleaded guilty to statutory rape has sparkedafirestorm online over the court's message on sex with minors even as it raises questions about the Penal Code and other criminal laws.
Incensed Malaysians have taken to Twitter and Facebook in the past few days to vent their outrage against the judiciary after the Court of Appeal was reported to have reversed last WednesdayaHigh Court decision to jail tenpin bowling ace, Noor Afizal Azizan, for five years — suggesting that fame andabright future is enough to ensureaconvicted offender getsaticket away from jail. On microblogging site, Twitter, criticism against the appellate court's decision grew so heated it spurred the creation ofahashtag movement — #BrightFutureRapeOK — on the subject.
"How 'brightafuture' really?.....even if he brings back the olympics gold medal I'd still want justice be served," saidaTwitter user who called herself Adibah Noor on her account, @adibahnoor.
"Malaysian rapist walks scot-free for beinganational bowler. Why. Is. My. Country. So. Messed. Up," tweeted another cyber citizen identified as Davina Goh on her account, @duuuhvina.
"Justice gets bowled over #BrightFutureRapeOK," Irwan Abdul Rahman said on his account, @irwanargh.
They were responding to Court of Appeal President Tan Sri Raus Sharif who was reported by state news agency Bernama to have agreed with Noor Afizal's defence lawyer that public interest would not be served if the athlete was sent to jail as he hadabright future. The decision by the three-man panel — delivered last Wednesday — was unanimous.
The Court of Appeal had ruled to reinstateaSessions Court sentence to bind over the athlete for good behaviour onaRM25,000 bond for five years after he pleaded guilty to raping the girl, then aged only 13, atahotel in Ayer Keroh, Malacca at the time of the incident in 2009. Noor Afizal was reported to be 18 then.
Some commentors even took to branding Noor Afizalapaedophile-rapist as they slammed the judiciary for practicing double-standards and giving out what one tweeter suggested wasa"licence" for an adult to have sex withachild.
"Whoaa, tuan haji Bright Future. Now that's 1 big licence to bonkaminor...hehehehe," said Ahmad Kerp on his Twitter account, @Mr_Kerp.
Statutory rape is when an adult man has sex withagirl under the age of 16, with or without her consent. It is punishable withajail term of up to 20 years and whipping, as provided under section 375 of the Penal Code.
In Malaysia,aman is consideredafull-fledged adult once he reaches 18 years of age and if he commitsacrime, he will be judged asagrown-up and notajuvenile.
Child and women advocacy groups, however, appeared have mixed reactions over the issue.
Two children's rights groups, Childline Malaysia and Yayasan Chow Kit — among the first to slam the Court of Appeal decision — accused the judiciary of sending the wrong message to the public on child sex.
"With due respect to the experience and discretion of the judges, we are concerned thatanon-custodial sentence handed down to an adult offender, would trivialise the severity of the crime of statutory rape, and the precedence this would set for adult offenders in current and future statutory rape cases.
"Furthermore, the ambiguity of the reported mitigating reason of the offender havinga'bright future' is worrying in the possibility thatachild's right to protection and justice may be sacrificed, despite beingavictim," they said inajoint-statement on Childline's Facebook page,aday after the Court of Appeal delivered its judgment.
They highlighted thatagirl below 16 years old — the age of sexual consent — is not mature enough to make an informed decision about having sex, and requires the law to protect her against sexual predators.
Between 2006 and 2010, more than halfareported 16,159 rape cases involved girls below the age of consent, Childline said citing the Deputy Inspector-General of Police Datuk Seri Khalid Abu Bakar.
Some women groups said they were alarmed by the "light" sentence Noor Afizal was given.
"Our criminal justice system has failed our daughters and granddaughters when it trivializes an act of violence through the sentence that is meted out," said Lee Wei San, the senior programme officer in the All Women's Action Society (AWAM) said in an emailed reply to The Malaysian Insider.
"It hasadehumanising effect which normalises sexual violence and justifies the use (or abuse) of power instead of addressing the needs of our daughters and granddaughters for respect, love and most of all, justice," she added.
Other women groups were more guarded in expressing outrage.
The Joint Action Group For Gender Equality (JAG), an umbrella body representing six women NGOs — Sisters In Islam (SIS), Women's Aid Organisation (WAO), AWAM, Women's Centre for Change, Penang (WCC), Perak Women for Women Society (PWW) and Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER) — merely urged the judges to clarify their reasoning in sentencing Noor Afizal.
The Malaysian Insider understands this is due to the rising rate of minors indulging in sex with their sometimes older partners, or as one women's rights activist said, colloquially — "Suka sama suka"to mean consensual sex.
"On the surface, the judgement appears to hint at the application ofadouble standard by implying that anyone with the right 'credentials' can commitacrime, and get away witharap on the knuckles.
"Does it mean that an individual who is perceived to have no future would getaheavier sentence?" JAG said inajoint-statement last Friday as they asked clarify their judgment.
Lawyers told The Malaysian Insider that the court's decision that provoked suchapublic uproar is actually allowed in law and that it was commonly invoked by lawyers in defence of their clients who were first time offenders, even if it was not so commonly granted.
Criminal lawyer Sreekant Pillai said that even though section 376 of the Penal Code prescribesamandatory jail sentence for those convicted of statutory rape, judges heldadiscretionary power under section 294(1) of the Criminal Procedure Code to releaseafirst time offender onaprobation of good behaviour if they decided there were certain mitigating factors.
"Section 294 is something that is being used by lawyers to defend their clients every day because it is available to them. It isasecond chance section," Pillai said.
He added that the provision in the criminal law is not "an outright get-out-of-jail scott-free card" as it was not easily meted out and came with conditions.
Should the convicted offender be found guilty of another offence again within the probation period, he would immediately have to serveajail sentence besides his bailor having to pay up the bond.
"Don't they deserveasecond chance?" he asked.
Pillai said it was not so easy to criticise the Court of Appeal's decision as as they must have certain reasons to decide it was better to keep Noor Afizal out of prison than inside.
Civil liberties lawyer, Syahredzan Johan, echoed similar views.
He pointed out that the public should not be so quick to bay for blood and assume that the penalties for statutory rape was created to protect children.
"I would not be so fast to assume that the offence of statutory rape was formulated to protect children.
"Ponder this;agrown woman having sexual intercourse withaboy can never be guilty of statutory rape. How can it be said that this offence was designed to protect children?" he said.
Syahredzan said the recent case showed there was an urgency to relook Malaysia's archaic and narrow definition of rape under the law, and update the provisions based on current sensibilities.
"Oh definitely we need to relook at our rape laws, its outdated! Like howahusband can never commit rape on his wife. Or how statuory rape does does not coverawoman who has sexual intercourse withachild. Or how the law does not provide for what we calla'young man's defence' as in the UK, whereayoung person who honestly thought the female partner was of age only to find out she's below 16.
"I would go further and say that we need to relook at our Penal Code offences again and review them," he told The Malaysian Insider in an email.
Posted: 12 Aug 2012 03:14 AM PDT
If truth be told, I am lost inaworld of my own, far far away from the maddening news. Pardon my ignornance but if not for Shadower who sent me the following article, I would not be aware of our state of *coughs* progress. Thanks, Shadower, for sharing this enlightening news. :-)
According to our wonderful national news agency, Bernama:
KANGAR: Malaysia has managed to build an impressive modern civilisation atatime when many countries are on the verge of recession, said Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Mohd Yassin.
According to Muhyiddin, many countries, especially Islamic ones wished to make Malaysiaarole model due to its achievements in various fields.
Speaking atabreaking of fast function with the leaders and people of Perlis at Dewan 2020 here yesterday, he said Malaysia's achievements were not justamatter of fate but due to the capability and intelligence of its leadership.
He said Malaysia has targetted to be the first developed Islamic country by 2020 and it will do so in the next eight years.
With the country's economic strength, Malaysians should not be faced with unemployment, as there were always opportunities, he said.
Unemployment only occurred when locals were choosy, which leaves such opportunities to foreign workers, he added.
"The country is expected to need 3.3 million human capital in the next eight years in various fields," he said.
He remarked that the government had always focused on the education sector and turned it into the people's right.
"Education is for everyone. For 55 years (since Independence), we have developed Malaysian society to become what it is today and one of the sector's success is the reduction of poverty," he said.
Muhyiddin, who is also Education Minister, said the government was also in the midst of reviewing the education system so it could produce more human capital of quality.
During the function, Muhyiddin and his wife Puan Sri Norainee Abdul Rahman presented Ramadan aid to 1,900 single mothers and orphans.
The deputy prime minister also launchedabook, titled 'Al-Hussain Mosque' authored byagroup of writers led by Tan Sri Mohd Ariffin Yusuf, the generous donor who sponsored the construction of the mosque.
The mosque, which has become the new landmark of Kuala Perlis, is being managed by Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).
Also present at the event was Menteri Besar Datuk Seri Dr Md Isa Sabu. — Bernama
"Guru lelaki itu dilaporkan memanggil mangsa datang dekat dengannya sebelum memegang alat sulitnya," katanya.
"Sejak itu, mangsa dilaporkan sering murung dan takut pergi ke sekolah. "Namun tak tahan diperlakukan demikian, mangsa menceritakan kejadian itu kepada ibunya.
"Terkejut dengan pengakuan itu, ibu mangsa bergegas ke sekolah untuk mengadu kepada guru besar. Selepas siasatan dilakukan pihak pengurusan sekolah, guru terbabit mengakui melakukan perkara keji itu," katanya.
Mangsa kemudian tampil membuat laporan di balai polis untuk tindakan lanjut. -hm
Posted: 12 Aug 2012 02:10 AM PDT
Posted: 12 Aug 2012 02:06 AM PDT
Posted: 12 Aug 2012 01:50 AM PDT
Pontian - Pertubuhan Solidariti Anak Muda Malaysia, kawasan Pontian, kesal dengan tindakan tidak bertanggungjawab segelintir pihak yang didakwa mengedar poster gambar beberapa pemimpin tertinggi parti pembangkang dalam keadaan memalukan.
Penyelarasnya, Mohammad Saiful Amri Saifullah berkata, pengedaran poster yang menggunakan pelbagai kata-kata kesat terhadap pemimpin dan parti pembangkang turut dikesan dibuang di hadapan sebuah sekolah rendah di Benut, di sini.
Menurutnya, poster itu diedarkan di kawasan pekan kecil di Tampok, Ayer Baloi dan Benut, sejak awal pagi kelmarin.
Mohammad Saiful Amri mendakwa, kira-kira 300 poster dijumpai sepanjang kerja pembersihan dan pengutipan yang dijalankan bersama ahli pertubuhan.
Jelasnya, dia tidak menolak kemungkinan, jumlah poster yang dibuang mencecah angka ribuan memandangkan pihaknya masih menerima aduan daripada orang ramai dan ahli pertubuhan.
Tambahnya, poster berkenaan seperti menghina perjuangan parti pembangkang apabila secara terang-terangan mempermainkan gambar pemimpin tertinggi Pas dan Parti Keadilan Rakyat (PKR), Mursyidul Am Pas, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa pemimpin lain.
"Selain gambar, kata-kata kesat yang sungguh memalukan kepimpinan tertinggi Pas turut ditulis di poster berkenaan yang jelas menunjukkan kebiadaban pihak yang tidak bertanggungjawab ini.
"Lebih memalukan, perkara ini terjadi pada Ramadan dan sanggup diedar di hadapan sekolah rendah," katanya kepada Sinar Harian, di Ayer Baloi, di sini, kelmarin.
Mohammad Saiful Amri berkata, poster berkenaan turut dicetak dalam saiz A4 atau seperti risalah bagi diedarkan dari rumah ke rumah di beberapa kampung dan kedai di kawasan pekan kecil, di sini.
Justeru, satu laporan polis di Balai Polis Ayer Baloi dibuat petang kelmarin, berhubung pengedaran poster itu.
"Kami mahu pihak berkuasa menjalankan siasatan mencari dalang pelaku pengedaran poster ini, memandangkan hal sebegini sudah terlalu kerap berlaku," katanya.
Menurutnya, perkara sama berlaku pada awal Januari lalu, tetapi ketika itu bilangan poster yang diedar tidak banyak berbanding yang terbaru ini.
Tegasnya, pihak yang mengedar poster ini perlu bertanggungjawab dan segera berhenti daripada melakukannya, kerana tindakan mereka jelas menunjukkan taktik politik kotor. -SH
Posted: 12 Aug 2012 12:39 AM PDT
This isa'hate' letter fromaboy toagirl whose father does not like him and wants them to end their relationship.
Hence, te boy wrote this letter to the girlknowing that the girl's father will definitely read this letter...
However, before handing over the letter to the girl, the boy told the girl to "READ BETWEEN THE LINES", meaning - only read the lines with bold font So.. Please try reading it again! It's so smart and sweet... :)
A bit corny but refreshing inaworld where many do not really believe in true love. Would any reader care to share any of their love letters from days of old? :-) Haveanice day!
Posted: 12 Aug 2012 12:36 AM PDT
ရေးသူ :: Aungaung Thanမီဒီယာ :: Facebook ဒါတွေသိပါသလား ကိုခင်ရီ ခင်ဗျားပြောသလိုဆိုရင် မင်းတုန်းမင်း နဲ့ သီပေါမင်း တို့ မြန်မာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲဒီ မင်းနှစ်ပါး ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ဘင်ဂါလီ မဟုတ်တာတော့ ကျွန်တော် သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမှာတော့ မိန်းမတယောက်ဘဲယူရတာ… အခုဟာကတအားများနေတယ်... လေးယောက်လောက်ရှိတယ်…"လ၀က ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ (၇.၈.၂၀၁၂ နေ့ စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်)
"မောင်းမ လက်သုံးပုံ" မင်းတုန်းမင်း မိဘုရားများတာလူတိုင်းသိတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောတော့ နန်းတော်ထဲက အမျိုးသမီးတွေအားလုံး သူ့မယားချည်းလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒီတော့ နန်းတော်ထဲက အမျိုးသမီးတွေဟာ အရေးဟဲ့အကြောင်းဟဲ့ဆို သက်လုံးကောင်းဖို့ဆိုတာထက် အရှင့်အလိုကောင်းဖို့ လေ့ကျင့်သင်ကြားရဟန်တူပါတယ်။ ဒီတော့ လက်သုံးပုံကျမ်းအဖြစ် မှတ်တမ်းလုပ်ပြီး သင်ကြားပေးရပါတယ်။ အဲဒီကျမ်းကို " မောင်းမ လက်သုံးပုံ " လို့ ခေါ်ပါသတဲ့။ ဒေါက်သာသန်းထွန်း နယ်လှည့်ရာဇဝင် စာ၂၈၄မှာ ပြောထားတာက မင်းတုန်းမင်းကြီးရဲ့ မိဘုရားတစ်ပါးမှာ ပုရပိုဒ်တစ်ခုရှိတယ်။ လူယောက်ျား လူမိန်းမ နှစ်ယောက်တွဲသံ ဝါသပြုနေတဲ့ ပုံနှစ်ဆယ့်လေးပုံပါသတဲ့။ အသက်ကြီးလာတဲ့ မိဘုရားကြီးက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခိုင်းလို့ အခိုင်းခံရတဲ့လူက တိတ်တဆိတ် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားလို့ ပုံမှတ်တမ်းကျန်ရစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီဓာတ်ပုံကိုတော့ မြင်ဖူးချင်ပါရဲ့။ ဘယ်မိဖုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ နာမည်တပ်ပြီးမပြောခဲ့ပေမယ့် ထားဝယ်မှာနေသွားတဲ့ မင်းတုန်းမင်းရဲ့ နာမည်ကြီး မိဘုရားကြီးများဖြစ်မလားလို့ ခန့်မှန်းပါရဲ့။ရှေးက မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် နန်းတွင်းဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ သင်ကြားရတဲ့ နန်းမူနန်းရာတွေထဲမှာ " လိင်မှုဆိုင်ရာဟာလည်း မသင်မဖြစ်သင်ကြားရတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
မင်းတုန်းမင်းပြီးတော့ သီပေါမင်းလက်ထက် လှမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။ ညီအမတွေကို မယား/မိဖုရားလုပ်တာ လူတိုင်းသိတယ်။ စုဖုရားလတ် ချုပ်ချယ်လို့ သိပ်မရှုပ်နိုင်ရှာဘူးရယ်လို့ လူတိုင်းသိထားကြတယ်။ ဒိုင်းခင်ခင်ကတော့ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်အဖြစ်ကျန်ရစ်တယ်။ စုဖုရားလတ် ဝေဖန်ရေးတွေထဲမှာ ဆရာကြီးမြသန်းတင့်ရဲ့ ဝေဖန်ရေးမှာတော့ စုဖုရားလတ် သီပေါနဲ့ပေါင်းဖက်တော့ ဆယ်ကျော်သက်။ ပါတော်မူတော့ ၂၀ စွန်းစွန်းရယ်။
ဒီတော့ ဒီအသက်ရွယ် ဘုရင့်မိဘုရားတစ်ပါးဆီ ဒီလိုအပြုမူတွေရှိတယ်ဆိုသာ သာမန်မိန်းမသားတွေလို ပြုမူတာဘဲဆိုပြီး ဖေးဖေးမမပြောသွားခဲ့တယ်။ လူတချို့ကတော့ စုဖုရားလတ်ဟာ တစ်လင်တစ်မယား စနစ်ကိုတည်ထောင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ နေဝင်ချိန်မိဖုရားတစ်ပါးအဖြစ် ခေါ်ဆိုတတ်ပါသေးတယ်။ ထားပါတော့။
သီပေါမင်းခေတ် ဝက်မစွတ်ဝန်ထောက် သိမ်းထားတဲ့ ပုရပိုဒ်တွေထဲမှာ ဘုရင်အလိုရှိတိုင်း ကာမဂုံဖြည့်ပေးရတဲ့ အမျိုးသမီးစာရင်း ကျန်ရစ်တယ်။ အဲဒီစာရင်းကို ပြုစုပေးရတဲ့သူက ရေနံသာစားဖြစ်တယ်။ ရှင်းရှင်းပြောတော့ ဘုရင်လုပ်သူက အဟမ်း အဟမ်း ဆိုရင် ရေနံသာစားက စားရင်းထဲကအတိုင်း နီးစပ်ရာ အမျိုးသမီးပြေးခေါ်ပေးရဟန်တူပါတယ်။ စာရင်းကို ကြည့်ရအောင်ပါ။" ကာမဂုံ အခွင့်ရလျှင် အခါမရွေး ( x ) လိုကြောင်း ရေနံသာ ရေတွက်သည့်စာရင်း "သမီးပျို စာရင်းဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၁၆ ယောက်။၁။ အစ်မတော်ဘုရား ( ချွန်းတောင်း / မိုင်းခိုင်မင်းသမီး )၂။ ပြင်စည်မင်းသမီး (မကွေး မိဖုရားသမီး )၃။ မိုးမိတ်မင်းသမီး (စာပွဲတောင်းမိဖုရားသမီး )၄။ လှိုင်ကျွန်းသမီးကြီး (တောင်တွင်း/မင်းကတော်သမီး)၅။ ငန်စွန် (မိဖုရား)သမီး ထရန်ကာ (မင်းသမီး)၆။ ကြေးမြှင့် မိဖုရား၇။ ပင်းအတွင်းဝန် သမီး၈။ မိုင်ခိုင် ( မြို့စားခင်မမင်းဝန်) မင်းသမီးအကြီး၉။ မိုင်ခိုင် ( မြို့စားခင်မမင်းဝန်) မင်းသမီးအငယ်၁၀။ ညောင်ဝန် သမီး၁၁။ ဥယာဉ်အုပ် သမီး၁၂။ တရားမ အရေးပိုင်သမီး၁၃။ စာရေးကြီး ငအုံ သမီးအကြီး၁၄။ ကုလားဝန် သမီးအကြီး၁၅။ သီပေါဝန် သမီး၁၆။ ပင်သာ သမီး
သူတပါး မယားတွေလည်းပါတယ်။ စာရင်းကြည့်ပါ၁။ တောင်ခွင်မင်းကြီး ကတော်၂။ ပင်သာ (မင်းသား) မယား၃။ စာရေးကြီး ဦးဘိုးရှုတ် မယား၎။ ရေနံချောင်းမင်းကြီး မယား သီလ၅။ အမြောံဝန် မယား၆။ ကွပ်ရွာဝန်ထောံ မယား၇။ ခန်ပတ်ဝန်ကြီး မယား၈။ ရှေ့ဝင်းမှူး မယားစုစုပေါင်း သူတပါး မယား ၈ ယောက်ရှိတယ်။
သူတပါး တူမ နှင့် အခြား သမီးလား မယားလားမသိတဲ့ စာရင်းက၁။ ပင်းကလဲဝန်ထောံ တူမ၂။ ကုလားမ ဘီဘီ၃။ ပြင်စည်၎။ ကျောံပန်းတောင်းစုစုပေါင်း ၄ ယောက်။ သီပေါမင်းခေတ်မှာ အဖြူမ ကိုယ်လုပ်တော်တွေလည်းရှိတယ်။ သူတို့တွေဟာ သက်ဆိုင်ရာနယ်ချဲ့လိုတဲ့ အစိုးရကစေလွတ်တဲ့ လခစားကြေးစား မိန်မပျက် တစ်ဖြစ်လဲ သူလျှိုတွေပေါ့။ နာမည်ကြီးကိုယ်လုပ်တော် ကတော့ ယွန်းခင်ခင် (The Lacquer Lady)ပေါ့။
ဒီစာရင်းဟာ သီပေါမင်းရဲ့ မယားစာရင်းဆိုသေချာစေတာက လူအမည်တွေနှင့် အမိန့်တော်ထုတ်တဲ့နေ့ ( မှတ်တမ်းတင်တဲ့နေ့ ) ဟာ မြန်မာလို ၁၂၄၆-၁၂၄၇ ခု ( ၁၈၈၄-၅ ) ဖြစ်တာကြောင့်ပါတဲ့။
အထူးမှတ်သားရမှာက ရှင်ဘုရင့်အလိုရှိတိုင်း လာရောက်ပြီး ကာမဂုံ ဆက်ရမယ့်စာရင်းထဲမှာ သူတပါးမယားတွေပါနေတာပါဘဲ။ ဘာသာတရားအဆုံးမနှင့် သီလတရား ကျင့်ဝတ်တွေရှိစေကာမူ ဘုရင်တွေအတွက် အကျုံးမဝင်တာ သတိထားမိပါတယ်။ ဘုရင်ဆိုတာ ကာမေသု သီလစောင့်စရာမလိုတဲ့သဘောပေါ့။ မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးတော့ မပြောတော့ပါဘူး။
Posted: 12 Aug 2012 12:58 AM PDT
Tidak wujud istilah penggunaan 'kafir harbi' selagimana tidak tertegaknya sebuah pentadbiran negara Islam yang sebenar, tegas Datuk Dr Haron Din.
Sementara itu, memetik laporan Malaysiakini, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah berkata tidak perlu mengisytiharkan haram kepada umat Islam untuk menyokong DAP kerana ia hanya berkaitan perbezaan pandangan dalam politik.
Sebelum ini, kenyataan Pengasas Pondok Geting, Tumpat, Kelantan, Abdullah Sa'amah, dipetik Utusan Malaysia menyatakan bahawa umat Islam haram menyokong DAP kerana ia menolak Islam dan tergolong dalam kafir harbi. -TVS
Posted: 11 Aug 2012 10:08 PM PDT
Posted: 11 Aug 2012 10:25 PM PDT
Siasatan awam pihak Suhakam ke atas dakwaan pencabulan hak asasi manusia yang berlaku sebelum, semasa dan selepas perhimpunan aman Bersih 3.0 telah bermula sejak5Julai yang lalu.
Terdapat beberapa anggota polis dan FRU yang melepaskan tembakan gas pemedih mata secara terus terhadap orang awam walhal mereka sepatutnya melepaskan tembakan dari jarak yang selamat bagi membolehkan peserta bersurai.
Seorang saksi terpaksa menderita hilang penglihatan mata sebelah kiri akibat terkena kelongsong gas pemedih mata yang ditembak dari jarak dekat. Dia baru sahaja bergraduasi dan telah kehilangan pekerjaan pertama akibat kecederaan yang dialami.
Beberapa saksi lain menyatakan terlalu banyak gas pemedih mata dilepaskan di kawasan sempit yang dipenuhi orang awam menyebabkan mereka tidak mempunyai ruang untuk menyelamatkan diri. Diawal inkuiri, seorang saksi memberitahu panel siasatan bahawa dia telah terkena kelonsong gas pemedih mata di leher menyebabkan dia pengsan semasa kejadian.
Posted: 12 Aug 2012 05:19 AM PDT
Posted: 11 Aug 2012 08:00 PM PDT
Ribuan orangramai hadir untuk mendengar Kuliah Soal Jawab Ustaz Azhar Idrus di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi bersama Abby Abadi, Faizal Tahir dan Man Raja Lawak...
Faizal Tahir, Bila Lagi Nak Ikut Jejak Langkah Ali XPDC, Sham Kamikaze, Bob Lokman, Aishah, Abby Abadi & Zuar XPDC?... Macam Tak Lama Lagi Jer...
Posted: 11 Aug 2012 03:30 PM PDT
A school dance floor includedastraight line down the middle dividing the floor in two equal halves. Boys were lined up against one wall and girls against the opposite wall, each facing the centre line.
They were instructed to advance in stages towards the centre line every ten seconds, where the distance from the person to the centre line at each stage is equal to one-half the distance at the past stage.